FANKALAZANA NY FAHAZATO TAONA NISAMBORANA NY MPITARIKA NY V.V.S
Nanatanteraka hetsika ho fankalazana ny fahazato taona nisamborana ny mpitarika VVS ny SOAMIAKANGA, VOHITSERA, HAVATSA UPEM, SAMIS-ESIC ny Sabotsy faha 19 desambra 2015 lasa teo, tao amin’ny Grand-Amphi DEGS teny amin'ny Anjerimanontolon'Antananarivo (Ankatso).
Tamin’ny 9 ora maraina sy sasany no nanomboka ny fotoana ka niaraha-nihaino ny hiram-pirenena. Ny Antoko mpihira avy ao amin'ny Fakiolté n'ny Siansa mantsy no nihira izany tamin'ny fomba fihiran-dry zareo ny andininy telo. Ramatoa ANDRIANASOLO Hajaina filohan’ny havàtsa UPEM no nandray ny fitenenana voalohany ary nodimbiasan'Andriamatoa filohan’ny Oniversite, izay nanokatra ny fety tamin’ny fomba ofisialy. Rehefa izany dia nifandimby nanao lahateny ny filohan'ny vondrom-panabeazana ACCEM RATREMA William.
Rehefa izany dia nitarika ny famelabelaran-kevitra Andriamatoa RAHAINGOSON Henri (Di). Teboka efatra no novahavahana tamin’ny tapany voalohany :
ny loharano nipoiran’ny V.V.S.
ireo angady nananana sy vy nahitana ny V.V .S
ny tanjon'ny VVS
ny firafitry ny V.V.S.
Namaky ny Japana sy ny Japanesa nosoratan’i dokotera Rajaonah aloha i Dol’aj, voalaza fa io lahatsoratra io no anisan’ny nanetsika an-dRavelojaona hanoratra ny "le japon et le japonais" tamin’ny taona 1913. Ny Ami indray avy eo no namaky ny lahatsoratr’i RAVOAHANGY Andrianavalona Joseph ka teo no nitanisana ireo angady nananana sy vy nahitana ny fikambanana dia :
RAVOAHANGY Andrianavalona Joseph
Izy ireo dia samy mpianatra tao amin’ny Ecole de Médecine Ankadinandriana daholo. Anisan’ny tarigetran’ny VVS ny hanandratana ny maha Malagasy. Nolazaina koa fa fikambanana tsy nanana fanekena izy, tsy nanana foiben-toerana satria fikambanana miafina sy tsy ara-dalàna ara-panjakana. Notandreman’ny V.V.S. fatratra ny tsy hisian’ny fampiasan-kery. Ny hitia sy hanasoa ny tanindrazana no voadin’izy ireo. Ampatsiahivina fa ity fikambanana ity moa dia teraka tamin’ny 1913 vokatry ny lahatsoratry RAVELOJAONA mahakasika ny Japana sy ny Japoney. Anisan’ny antony nitsanganan’ny Fikambanana ihany koa ny fandravana ny fanjakana malagasy tamin’ny 1896, ny nitifirana ny Printsy RATSIMAMANGA, ny nanaovana sesitany ny mpanjakavavy RANAVALONA III sy ny Praiminisitra, indrindraindrindra fa ny « code de l’indigénat » izay didy nahatonga ny Malagasy hiditra an-tranomaizina.
Rindran-kira sy vela-kevitra
Vita ny tapany voalohany, nampiditra ny tarika solika teo an-tsehatra Ramatoa Hajaina, hiran'i NAKA RABEMANANTSOA roa no natolotr’izy ireo : "ô ! raifody an’ala" sy "tandremo". Nandray anjara fitenenana kosa ny avy ao amin’ny SAMIS-ESIC, ny SAMIS (Sekoly Ambony Momba ny
Ita sy ny Serasera no dikany, amin’ny teny frantsay kosa no hoe ESIC na Ecole superieur de l’information et de la communication). Nitohy indray ny vela-kevitra ka noresahana ny akon’ny V.V.S. teto an-toerana sy tany Frantsa izay niroborobo ka niezaka nanao ny hampijoro ara-panjakana ny fikambanany. Saingy indrisy fa nipoaka ny ady lehibe voalohany tamin’ny 1914 ka tsy tontosa ny fikasana. Nanomboka amin’izay ary ny famotehana ny V.V.S. tamin’ny 1915 ka voasambotra voalohany tamin’izany RAJAOBELINA tao Ambalavao Fianarantsoa. Ny 24 desambra 1915 dia voasambotra koa ny mpitandrina RAVELOJAONA, Frera RAFIRINGA Raphael Louis, Frera Julien. Nisy natao sesitany tany DZAOUDZI (Mayotte), Nosilava. Nisy ireo nogadraina tetsy Antanimora, ny tsy ampy taona nalefa tany Anjanamasina.
Antsa tononkalo sy hiran'ny amboaram-peo
Notohizana tamin'ny fiantsana tononkalo nosoratana tany an-tsesitany indray ny fotoana.
"VAZON’NY LAVITRA", tononkalon'Ny Avana RAMANANTOANINA, nantsain’i Antsa sy i Tsito
"IZAY SAMBO IZAY", tononkalon'Ny Avana RAMANANTOANINA, nantsain’i Ngaly
R’imbossa no nanao feo lafika nandritra ny fiantsana, ary nanao ihany koa ny hirany avy eo
"Maty ilay masoandro" - hiran’i Samuel RAMEFY
"Mazàna ny tsara" - hiran'i Naka RABEMANANTSOA
"Manina ny tany niaviana" - hiran’i Justin RAJORO.
Ireto avy kosa ireo amboram-peo nandray anjara.
Ny avy ao amin'ny “Agronomie” : “Raha ny oloko” sy “Ilay efa tia antsika’’
Ny MPIZAKA STELARIM. Nahafinaritra ery ny fanaovan’izy ireo ny "Vorona handeha ho aiza iry ?"
Ny avy ao amin’ny ENS tamin’ny alalan’ny hira efa fantatry ny maro hoe "Inona no ifandrafindrafiana?" sy ilay hoe "Hiran'ny fanantenana", tononkalon'Ny Avana Ramanantoanina nosoratana tany an-tsesitany
Ny amboaram-peo avy ao amin’ny Siantsa
Ny amboaram-peo avy ao amin’ny Lettres
Teo ampamaranana ny lanonana dia nakarina teny ambony lampihazo avokoa ireo rehetra nandray anjara tamin’ny fanafanàna ny fety, notolorana fisaorana izy ireo sy ny mpanatrika rehetra.
Mbola hira sy antsa ihany no nisarahan'ny rehetra.
Noredonina ny "NOSY TANINDRAZAKO"
Nantsain’i Dol’aj ny "Tsofy rano", tononkalon-dRanjatohery Harilala
Napetraky DI ny tso-dranony tamin’ny fiantsany ny tononkalo hoe "Indro ny tso-drano".
Nahafinaritra ity hetsika iray ity,nahatonga saina ny tsirairay hamoha indray ny fitiava-tanindrazana, nampitodika ny olona indray amin’ny tantara izay efa saika tsy noheveriny intsony,indrindra indrindra fanampiana ho an’ny mpianatra. Sitraka sy telina ho an’ny mpikarakara !
Angona : Njanja, Ny Ami, Heriarilala
Teo amin'ny hira rodobe famaranana
Dol’aj, anisan'ireo nanao famelabelaran-kevitra sy niantsa tononkalo